Kuya kubakho ububi bobubi boMhlali weNintendo Shintsha, ingqokelela yeZityhilelo | Iindaba zeGajethi
Siyaqhubeka nokubhingo namhlanje ngemidlalo yevidiyo, kwaye kukuba khange sitsho Nintendo Tshintshela, Kubonakala ngathi yonke impumelelo yayo yaphela kancinci ngenxa yokunqongophala kwemidlalo yevidiyo kunye nenkxaso encinci (okanye eyayifumana) kubaphuhlisi abakhulu. Kucacile ukuba i-hybride phakathi kweelaptop kunye ne-desktop asinika yona uNintendo yinto yokudlala elungileyo, kodwa ayinakwanela kumandla kuxhomekeke kwizihlandlo ezinjani.
Namhlanje siza kuthetha Ukuqokelelwa kweZinto eziBi zaMhlali, eyokuqala yesaga eyaziwayo yeCapcom eqinisekisiweyo yeNintendo switch, kwaye oko kuya kubavuyisa abathandi belo hlobo. Kubonakala ngathi iNintendo Shintsha ngokuthe ngcembe iphumelela iintliziyo zabaphuhlisi abakhulu.
UCapcom, kwakamsinya emva kokubhengeza ukuba uMlwi weSitrato uza kuza kwisikhonkwane esikhethekileyo se-N enkulu, uphawule kakuhle ukuba siza kuba nakho ukufikelela kulo mdlalo wevidiyo. Ngokukodwa siya kufumana i Ukutyhilwa kobubi babahlali Ingqokelela eya kukhatshwa kukukhutshelwa simahla kwekopi yeZityhilelo ezimbi zoMhlali 2. Ezi ndaba ziza kuthi ngebhlog kaCapcom, apho banxibelelana ngqo nezigidi zabalandeli kwihlabathi liphela.
Umdlalo uya kubiza i-39,99 yeedola e-United States yaseMelika, kwaye unokuthengwa kunye kunye ngokwahlukeneyo ngokutshintshela i $ 19,99 kwiNintendo Shintsha eShop. Le midlalo mibini iza kufika nge-29 ka-Agasti kwezinye iiplatifti ezimbini zokulwa, i-Sony's PlayStation 4 kunye ne-Xbox One yeMicrosoft. Nangona kunjalo, ICapcom ayibonisanga ngqo malunga nexesha esinokubona ngalo uMhlali oMbi kwiZityhilelo kwiNintendo Shintsha, uphawule kuphela ukuba izakufika ngamanye amaxesha ekupheleni konyaka ka-2017. Kwakhona, uNintendo ulinde ngezandla ezivulekileyo, kodwa ayisiyiyo eyona nto iphambili kubaphuhlisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Kuyakubakho uMhlali wobubi kwiNintendo Shintsha, ingqokelela yeZityhilelo
NGOKU: Okuncinci ngaphaya kwamavili, umdlalo owenziwe eSpain [SWEEPSTAKES]